Nyochaa ugbo ugbo Odisha | Maka Oku ọzọ na: + 91-993.702.7574
Ngwa ákwà Odisha
Ị bụ onye na-enwe obi ụtọ site n'ịhụ aghụghọ ma ọ bụ okwu Nkume na-amasị gị? Mgbe ahụ i biara ebe kwesịrị ekwesị. Ákwá Pebbles 'Ákwá Odisha na-enye gị ụzọ dịgasị iche iche iji chọpụta ebe texisha pụrụ iche n'ụwa. India bụ otu n'ime ala kachasị ọnụ ala n'ihe gbasara asọmpi ụgwọ nke ihe ndị ahụ. Odisha nwere ogologo oge nke ụlọ ọrụ textile. Ulo oru nke Odisha enwetawo otuto n'uwa nile na aha maka imewe na mma. Di iche iche di iche iche di na Odisha dika Sambalpuri, Bomkei na Berhampuri. Odisha bụkwa onye a ma ama n'ihi ụdị ikpa nke Ikat. Ị nwere ike itinye onwe gị na ndị a site n'enyemaka nke Textile tours Odisha. Textiles bụ omenala ọdịnala nke na-egosipụta akụkọ ihe mere eme nke ebe ndị ha si malite. Akwụkwọ ederede na India dịgasị iche iche na ebe dị iche iche, ọ bụghị naanị na ụdị ụdị ihe onwunwe ma ọ bụ ákwà ma na-emepụta, na-egosipụta n'ime ha ụdị dịgasị iche iche na agbụrụ omenala. Sand Pebbles 'Ndagharị edozi Odisha ga-eme ka ị hụ ahụ zuru oke nke artefacts textile na apparels.
Anyị Odisha Textile Tour nchịkọta kacha mma maka ndị na-textiles na uwe ele ma na-achọ inyocha ụlọ ọrụ textile nke Odisha. Ọ bụ mmemme njegharị 14 na-ekpuchi Bhubaneswar, Nuapatna, na Maniabandha nke a ma ama maka Olasingh Textile Village, Chikiti Textile Village, Sambalpuri Textile Villages gburugburu Sagarpalli na Buttupalli, Barapalli Textile Village, Attabira Textile Village, Sericulture Projects, na Tussar Silk Village. I kwesịghị ichere iji nweta ọmarịcha Odisha Textile Travel. Tinye akpa gị ozugbo, wee hapụ anyị ihe fọdụrụnụ.
Ahịa: 51198 | 009 njegharị
DAY 01: BỤ
Na-ezukọ ma na-ekele gị mgbe ị bịarutere na Bhubaneswar Airport / Ụgbọ okporo ígwè ma wegazie ụlọ nkwari akụ. Ọ bụrụ na oge ruru, nleta nke ụlọ nsọ kacha ochie nke 07th Century AD ka 12th Century AD. N'abalị na Bhubaneswar.
Mgbe nri ụtụtụ gaa Dhenkanal na-aga na Nuapatna (IKAT Weaving village) na Sadeibarini (Dhokra Casting Village). N'abalị na Dhenkanal.
Mgbe nri ụtụtụ na-aga Sambalpur.Hụ ụnyaahụ gaa na obodo ụfọdụ na-akwa ákwà. N'abalị na Sambalpur.
Mgbe nri ụtụtụ gasịrị Balangir site na Bargarh Weaving Villages na Barpali Silk Weaving Villages (ndị obodo Barpali bụ ndị ọkachamara kacha mma nke Tussar Silk). N'abalị na Balangir.
Mgbe nri ụtụtụ gara Sonepur Weaving Village. N'abalị na Balangir.
Mgbe nri ụtụtụ gaa Gopalpur site na Padmanavpur Weaving Village. N'abalị na Gopalpur.
ỤBỌCHỊ 07: ỊBỤRỤ
Mgbe nri ụtụtụ laghachiri Berhampur Rail Station / Bhubaneswar Airport maka ịga n'ihu.